Angela Merkel "Wax badan ayaa u qabsoomay Jarmalka 30-kii sano ee ay Wadajirka ahaayeen"
Mogadishu - 21:49:05
Sunday September 29, 2019 - 19:43:38 in Wararka by Super Admin
Hoggaamiyaha waddanka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax badan uu u qabsoomay dalkeeda tan markii ay midoobeen labada Jarmal ee Bariga iyo Galbeedka 1990-kii, iyadoo haatan laga joogo ku dhowaad 30 sanadood.
Hadalka Merkel ayaa ku soo aadaya xilli maalintii Midnimada Jarmalka ay naga xigto dhowr maalmood, taasoo ku beegan 03 Oktoobar, waxaana ay xustay in weli shaqo badan ay hor taallo Jarmalka.
Markii uu burburay derbigii Berlin 09 November 1989-kii waxaa dib u midoobay shucuubta Jarmalka oo uu derbigaasi u kala qaybinayay Bari iyo Galbeed, waxaana haatan weli dowladda Jarmalku ay xoogga saaraysaa sidii soddon sano kaddib loo simi lahaa nolosha dadka Jarmalka ee Bariga iyo Galbeedka, maadaama aysan dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba sinnayn.
"Waxaa muhiim ah in aan si wadajir ah uga shaqeyno mustaqbalka, taasoo u baahan in aan ka wada fikirno guud ahaan Jarmalka oo ay weli ka jirto farqi dhanka maciishadda ah, sidaa darteed mashaariicda waaweyn ee xukuumadda Jarmalku waa sidii ay u heli lahayd qaab nololeed oo loo wada siman yahay gebi ahaan Jarmalka, Miyiga iyo Magaallada, Waqooyiga iyo Koonfurta, Bariga iyo Galbeedka" ayay tiri Merkel.
09 November ee soo socotana, waxaa Jarmalku u dabaal u dabaal degi doonaa 30 guuradii ka soo wareegatay markii uu burburay derbigii Derbigii Berlin, halka 03 Oktoobar ee sanadka 2020-kana ay soddon sano u go’i doonto markii dib loo mideeyay dalka.